Izinhlelo ezinabantwana eMadrid | Izindaba Zokuhamba
Maria | | Ukuzilibazisa, Ukuhamba nezingane
Labo abazochitha izinsuku ezimbalwa nomndeni eMadrid ngokuqinisekile bazofuna ukwenza izinhlelo nezingane, ngoba zibavumela ukuba bazi uhlangothi oluhlukile lomuzi futhi ngasikhathi sinye vumela ingane esiyithwele sonke sizijabulise isikhashana.
IMadrid yidolobha elikhulu futhi elihlukahlukene kangangokuba kuhlala kunezinhlelo eziningi zokwenza. Nazi izinhlelo eziyi-6 nezingane eMadrid ezingenziwa njengomndeni phakathi nonyaka. Zijabulele!
1 Umnyuziyamu weRatoncito Pérez
2 Ukushushuluza ezintabeni
3 I-ICE Skating
4 Amapaki wokuzijabulisa
6 Phakathi kwezilwane
Umnyuziyamu weRatoncito Pérez
Inganekwane ye-Tooth Fairy ithi le gundane elinobungane linomsebenzi wokuqoqa wonke amazinyo ezingane zobisi lapho ewa bese kuthi wona ashiye uhlamvu lwemali ngaphansi komcamelo.
URatoncito Pérez unomsuka wakhe emcabangweni wenkolo kaLuis Coloma owasungula indaba negundane njenge-protagonist yokwehlisa usizi lweNkosi u-Alfonso XIII esemncane ngemuva kokulahlekelwa elinye lamazinyo akhe obisi.
Ngokwendaba, igundane belihlala esakhiweni esiku-Arenal Street eMadrid, eduze kwasePuerta del Sol futhi lisondele kakhulu ePalacio de Oriente. Njengamanje, esitezi sokuqala senombolo 8 yalowo mgwaqo, kuneNdlu-Museum yaseRatoncito Pérez, engavakashelwa nsuku zonke ngaphandle kweSonto. Umnyango we-House-Museum ungama-euro ama-3.
Amakhaza ayithuba elihle lokuzijwayeza imidlalo yasebusika, ngokuba ngesinye sezinhlelo nezingane eMadrid abazothanda kakhulu kwazise kuhlanganisa ubumnandi nosuku olungaphandle, olubajabulisa njalo.
Umphakathi waseMadrid unesinye sezindawo zokuvakasha zokushushuluza zokuqala ezavulwa ezweni emuva ngawo-40. YiPuerto de Navacerrada edumile eCercedilla, ngaphakathi kweSierra de Guadarrama futhi engekude nasenkabeni yedolobha kanye nesiteshi saseValdesquí, naso esisentabeni efanayo.
Ukushibilika eqhweni udlala ukuthola ukuthi ngubani oshesha kakhulu kungenye yezinhlelo eziyintandokazi zezingane, ikakhulukazi manje njengoba amazinga okushisa eqala ukwehla. Ngesikhathi sikaKhisimusi idolobha ligcwala izizinda ezincane zeqhwa ukujabulela amaholidi kodwa kuze kube yileso sikhathi, imindeni ingaya ePalacio de Hielo Dreams (Calle de Silvano, 77), enye yezindawo ezidume kakhulu eMadrid.
Le rink yeqhwa itholakala enxanxatheleni yezitolo enkulu futhi ivulekele unyaka wonke ukuthola ama-skating skating, i-hockey noma ukwenza izifundo ezithile zokushushuluza. Inobukhulu be-1800 m2 kanti ukungena kunenani lama-euro ayisi-7 kuye kwayi-12,50 kuye ngamahora noma uma sifuna ukuqasha izikeyiti. Ukuthola i-ice rink kuyadingeka ukugqoka amagilavu.
Olunye lwezinhlelo ezimnandi kakhulu nezingane eMadrid ukuvakashela okwakudala okufana neParque Warner noma iParque de Amusement, enikela ngazo zonke izinhlobo zemisebenzi ukuze ube nesikhathi esimnandi. Phakathi nonyaka bavamise ukuba nemicimbi ye-thematic ephathelene ne-Halloween noma uKhisimusi ngakho-ke ukuvakashela kubo ngezikhathi ezinjengaleli kuyithuba eliyingqayizivele lokwazi la mapaki wokuzijabulisa ngendlela ehlukile.
Ukungena kweParque Warner kungathengwa ebhokisini kusuka kuma-euro angama-39,90 futhi intengo yayo ingahluka ngokuya ngosuku namandla okuqinisekisa insizakalo enhle kakhulu. EPaki lokuzijabulisa, amathikithi asebhokisini afakwa ngentengo engu- € 32,90 yabantu abadala kanye ne- € 25,90 yezingane, kanti abathathe umhlalaphansi bakhokha u- € 19,40.
U-Andy Williams wayecula ukuthi uKhisimusi kwakuyisikhathi esihle kakhulu sonyaka futhi wayeqinisile. EMadrid imigwaqo igcwele izihlahla ezikhanyayo zemisayipuresi futhi ukukhanya kuyinika umbala okhethekile nomoya. Izingane zithanda ukuhamba emigwaqweni zivakashela izimakethe zikaKhisimusi nokungena eNaviluz, ibhasi likaKhisimusi elizungeza idolobha ukucabanga ngayo yonke imihlobiso yasebusika.
Kepha elinye lamacebo enziwe nezingane eMadrid okudala ngoKhisimusi yiThree Kings Parade ntambama ngoJanuwari 5. Ezintantini ezikhangayo ezigcwele umbala nokukhanya, la madoda amathathu ahlakaniphile asabalalisa amaswidi nokukhohlisa emphakathini wamanje kusukela ekuqaleni kwawo esiteshini saseNuevos Ministerios ePlaza de Cibeles lapho uphela khona.
Zonke izingane ziyazithanda izilwane ngakho ukuvakashela iFaunia noma iZoo yaseMadrid nazo kuwumqondo omuhle. IFaunia yipaki yetimu enikezelwe emvelweni ehlukaniswe yaba yimvelo eyishumi nanhlanu ehlukile ngokungafani ne-zoo kamasipala. Noma kunjalo, ayinazo izilwane eziningi njengalesi. Kunoma ikuphi, zombili izindawo zenza ukuhlangana nemiboniso nezilwane ngokombono wemfundo ezisiza abancane nabadala ukuthi baziqonde kangcono izici zabo nezindawo zabo zemvelo.
Ukungena kweFaunia kunenani lama-euro angama-26,45 kubantu abadala nezingane ezingaphansi kweminyaka engu-7 futhi abathathe umhlalaphansi bakhokha ama-euro angu-19,95. E-zoo, amathikithi ase-box office abiza ama-euro angama-23,30 kubantu abadala kanti abahola impesheni nezingane bakhokha ama-euro angu-18,90. Uma zithengwa online, intengo ishibhile.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Ukuzilibazisa » Izinhlelo ezinabantwana eMadrid
Yini ongayibona ezweni laseBasque